VIDEO: Maxaa ka soo baxay maalintii 1aad ee shirka midowga Musharixiinta mucaaradku Muqdisho ku yeesheen.
November 21, 2020 Xuseen 5
PUNTLANDTIMES (MUQDISHO)-Daahir Maxamuud Geelle oo kamid ah musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey shir maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen musharixiinta xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Daahir Geelle oo la hadlay warbaahinta kadib markii uu soo gaba-gaboobay shirka maalintii koowaad ayaa waxaa uu sheegay in Musharaxiinta xilka Madaxweynaha xiligaan ay arkaan khatar ku wajahan dimuqraadiyadda curr-danka ah ee Soomaaliya.
Waxa uu intaasi ku daray in dhammaan musharixiintii maanta isu yimid ay is cafiyeen ayna meesha ka saareen madmadowgii dhex-dooda ahaa, isla markaana meel uga soo wada jeestaan marxalada kala guurka ah ee dalka.
Dhanka kalena, Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxaa uu intaasi ku daray in baaqooda uu yahay nabad iyo dowladnimo sal adag iyo doorashada dalka oo ku dhacda si nabad oo xor ah, lagana fogaado wax kasta oo keeni kara qalalaase.
“Baaqeynu waxaa uu yahay nabad iyo dowladnimo sal adag, doorashooyin xor ah oo xalaal ah, xukunka hadda jira aan lagu heysan inay tartamaan balse qalooca ay geliyeen doorashada ay rabaan inay saxaan” ayuu yiri Musharax Daahir Geelle.
Rooti iyo farmajo
Xaq ayeey u leeyihiin hawiye ineey dhulkooda ka cayriyaan kooxdaan burcadda ah ee cayrta ah ee iyagoo boorsooyin maran wata soo galay muqdisho oo ka kala yimid caabudwaaq, hargaysa iyo boorama. Kooxdaan oo aruursanayo hantidii dadka reer muqdisho ayeey waliba aflagaado ugu Darren reer muqdisho waa Inaan waqti la Siin waa in si deg ah xamar looga saaro kooxdaan maafiyada ah.
Midkaan #Ali la yiraahdo waa duur joog caadi ah oo biyo ismarinin waa wax afaara qabiileysta ah oo bahdilan waaa waxa bismillaah lagu dhalin oo mal malkii laga ilaaway waa wax xabsi kusoo koray waa wax caloosha ka buko war waxa af xumaa walee waalidkii ku dhalay ayaa kugu dhib qabo War Ceelwaaq boorama iyo Hargiesa yaa dago soo Somali ah inta magaalo aad sheegtay intay ku yaalaan so Somalia kuma yaaalan war nagatag wax yehey maqruuqa ah
Waad ku sugtay